Sawiro ka iPod takhalusid Si fudud
> Resource > iPod > Sida loo Delete Photos ka iPod Si fudud
Ma synced tan oo sawiro si aad iPod, laakiin hadda aad rabto in aad tirtirto sawiro ka iPod? Ma baxay tirada hab? Marka gujinaya "Photo" icon aad iPod, waxaad ka heli kartaa in aad awoodi kartaa in ay tirtirto sawiro ku giringiriya mid Camera ka mid ah. Si kastaba ha ahaatee, ma wax la mid ah oo aad samayn karto si aad sawiro aad Photo Library ama albums abuuray keligaa.
Tan iyo markii aadan tirtiri kartaa sawirrada si toos ah iPod, waxaan si adag kuugu talinaynaa in la isticmaalo qalab dhinac saddexaad. Halkan waa mid awood leh oo dhamaystiran: Wondershare TunesGo (Windows) ama Wonershare TunesGo (Mac) . Macna ma laha hadii aad rabto in aad ka saarto kumanaan sawiro ama albums, sidaas samayn kara oo keliya in aad u. Intaa waxaa dheer, haddii aad sawirro lumay on your computer, waxaad awood u taageerto kor u sawiro ka iPod in computer, ka dibna tirtirto sawiro aad iPod.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo (Mac) oo kaliya taageeraa iPod xiriiri 4 iyo iPod xiriiri 5. Wondershare TunesGo taageertaa dheeraad ah oo lagu daydo iPod. Hubi ah iPod taageeray halkan . Labada versions of this macruufka taageero barnaamijka 5, macruufka 6 iyo sidoo kale macruufka 7. Halkan, waxaan idin ​​tusin doonaa sida in ay tirtirto aad sawiro iPod la TunesGo Wondershare.
Sidee in ay tirtirto sawiro ka iPod fudayd
Download qalab this on your computer. Markaas raac 2 tallaabo hoos. Tallaabooyinka waa fudud oo si sahlan. Waxaad ugu dhakhsaha badan doono is fahamsan yahay.
Tallaabada 1. Isku aad iPod la your computer
First of dhan, si ay u bartaan sida loo helo sawiro off iPod, waxaa idinku waajib ah si loo soo dajiyo iyo bilowno qalab waxtar leh on your computer. Isticmaal cable USB kaas oo ka yimaadaa adiga iyo iPod si ay u xirmaan your computer. Ka dib waxa uu ku xiran, qalab si toos ah waxaa lagu ogaan doonaa. Markaas, aad iPod la soo bandhigi doonaa on interface ugu weyn ee TunesGo.
Fiiro Gaar ah: Waxa muhiim ah in aad soo dajiyo Lugood on your computer.
Tallaabada 2. Sida loo helo sawiro aad iPod
Tiirka tagay, guji "Sawirro" inay soo qaadaan suuqa kala maamulka sawirka. Markaas, furmo sawir maamulka, furo mid album, sida Photo Library. Dooro photos doonayay. Marka aad dhamaysato, waa in aad ku dhufo "Delete".
Markaas, qalab bilaabi doonaa tirka sawiro aad iPod. Hubi in iPod xiran yahay si aad u computer waqtiga oo dhan.
Waa hagaag, ay tahay tallaabooyinka ku saabsan sida loo sawiro ka iPod saarto. Dhab ahaantii, qalab gabi ahaanba ka badan samayn kara. Waa awood aad ku wareejiso sawirrada ah oo dhan ka iPod in computer , gaar ahaan sawirada ku giringiriya Camera ah, iyo qeybsanaan ku xigeenka. Ka sokow, haddii aad leedahay wax ka badan hal Apple qalabka, sida iPhone / iPod / iPad, waxa aad awoodi kartaa in ay hagaagsan photos dhaxeeya iPad, iPod iPhone iyo fudayd.
Video inay iPod Converter - Beddelaan Video inay iPod
Tababare xiriiri iPod: Maamul Files on Your iPod taabashada
Sidee inuu ka soo kabsado ka dib markii Data Resetting Your iPod taabashada